Ungayichaza njani iNgeniso yeAdsense | Ezezimali
Ngexeshana yenza iwebhusayithi yakho okanye uhlobo oluthile lwenkonzo ye-Intanethi ungasebenzisa i Inkqubo yeAdsense yokufumana imali online enkosi kutyelelo olufumana kwiwebhusayithi yakho, nangona kunjalo, ixesha linokuza xa ingeniso ukuba ufumana umbulelo kule nkqubo kuninzi kakhulu onokucinga ukuba unakho kufuneka ubhengeze kwaye uhlawule irhafu.
Isenokungabi njalo kuwo wonke umntu osebenzisa iAdsense kuba uninzi aluboni ukugcwala kwabatyeleli inkulu ngokwaneleyo ukuba ingafumana ingeniso ebonakalayo yemali, kodwa kunokuhlala kukho ixesha apho oku kungenjalo, kunye ukugcwala kwiwebhusayithi yakho kukhula ngokucacileyo kwaye kufuneka uqale ucinge ngezi ntlobo zeengxaki. Ngaphambi kokungena kwingxaki malunga nokuba kunyanzelekile na ukuba uchaze umvuzo owufumana ngokuzimeleyo kwiwebhusayithi, kufuneka sifunde yintoni kanye le nkqubo yeAdsense, kwaye isebenza njani:
1 Yintoni i-adsense kwaye isebenza njani?
2 I-Adense isebenza ngamanyathelo amathathu alula:
3 Uyixela njani ingeniso yeAdsense
4 Qiniseka ukuba ucetyiswa kakuhle
Yintoni i-adsense kwaye isebenza njani?
I-Adsense yindlela elula nesimahla yokufumana umvuzo kwiwebhusayithi yakho ukupapasha iintengiso ezijolise kumxholo okwi-intanethi wephepha. I-Adsense ibonisa iintengiso zeendwendwe kwiwebhusayithi Ezifanelekileyo kwaye zinomtsalane kwaye zinokulungiswa ngokuhambelana noyilo lwewebhusayithi yakho.
Ezi iintengiso ziyenziwa kwaye zihlawulwe ngabathengisi Ufuna ukukhuthaza ntoni? iimveliso zakho okanye iinkonzo kwiwebhusayithi kwaye bahlawula amaxabiso ahlukeneyo kuhlobo ngalunye lwesibhengezo, kwaye isixa semali abasifumanayo siya kwahluka ngokunxulumene noku.
I-Adense isebenza ngamanyathelo amathathu alula:
Lungisa iwebhusayithi yakho izibhengezo zentengiso: Oku kwenziwa ngokuncamathisela ikhowudi yentengiso apho ufuna ukuyiposa khona.
Ezona ntengiso zihlawulwa kakhulu ziya kuvela kwiwebhusayithi yakho: Abathengisi bahlala becela ukuba bavele kwizibhengezo kwiziza ngefandesi yexesha lokwenyani, iintengiso ezinexabiso eliphezulu kwezi fandesi ziya kuvela kwiwebhusayithi yakho.
Fumana imali: I-Adsense inyamekela ii-invoyisi zabo bonke abathengisi kunye neenethiwekhi zentengiso ezivela kwiiwebhusayithi, bayaqinisekisa ukuba ufumana zonke iintlawulo ezihambelanayo.
El inkqubo yobhaliso ilula kakhulu, thumela nje ibe nye Isicelo kwindawo yeAdsense, bayijonga kwakhona kwaye bakwazise ngeveki nge-imeyile
Xa sele unemisebenzi yezoqoqosho ebhalisiweyo, kwaye ubhalisile phezulu koKhuseleko lweNtlalo kwaye unephepha lewebhu othathe isigqibo sokulisebenzisa Inkqubo ye-adsense Inkqubo ilula. Kwanele ukunxibelelana nesiqalo somsebenzi owongezelelweyo kwezoqoqosho kwi-Arhente yeRhafu, nakuNondyebo woKhuseleko loLuntu
Kwimeko UNondyebo Wokhuseleko Loluntu, imali oyifumanayo iyakufana, nokuba kunjalo, nokuba unemisebenzi eyahlukeneyo yezoqoqosho. Kwaye i Arhente yeRhafuInto ekuya kufuneka uyenze kukuxela ingeniso yekota kunye nonyaka kwibhokisi yesihloko esitsha, ngendlela efanayo, siya kuthi sinxibelelanise idatha yomthengi wethu, oya kuthi kule meko abe yiAdsense, ukuba umvuzo wonyaka ungaphezulu Ama-euro angama-3,000.
Amathandabuzo ahlala evela xa kunokwenzeka ukuba singenayo imisebenzi yezoqoqosho ebhaliswe ngaphambili, kwaye masibe newebhusayithi apho sisebenzisa iAdsense, nokuba ibhlog, iwebhusayithi, isiteshi seYouTube, inethiwekhi yoluntu, ikhonkco leendaba, phakathi kwabanye; Ke ngoku benza umvuzo omkhulu kwiintengiso zeAdsense.
Kwimeko yokugqibela kufuneka sazi ukuba Uhlobo lwesivumelwano esisayina kunye nenkampani kaGoogle eyiyo umnini wenkqubo yeAdsenseYikhontrakthi yomnikezeli weenkonzo zentengiso, oku kuthetha ukuba kukho iqela elithengayo, elingu-Adsense, elisibhatalelayo, kunye neqela elithengisayo, elilelo lisebenzisa iwebhusayithi yethu ukubhengeza.
Ngale ingentla siyacaca ukuba le yinto esisebenza ngayo kwezoqoqosho, ngumsebenzi wentengiso, ngenxa yeso sizathu kufuneka yibhalise kwiArhente yeRhafu, apho kufuneka sibhalise xa siqala ikhontrakthi yethu noGoogle, kulapho siqala khona umsebenzi, nokuba asikavelisi mali.
Adsense, kwimigaqo-nkqubo yayo iseka njengomgaqo ukuba iqala ukwenza ingeniso ukusuka kwinyanga emva kokuba sivelise i-100 yeedola ngenyanga, ngalo mzuzu apho kufuneka senze izibhengezo zekota, kuba khange sivelise nengeniso, isibhengezo siya kuziswa njengengeniso engenanto, kuba siqala ukwenza ingeniso kwaye isibhengezo sekota sifikile, emva koko siyakubhengeza konke ingeniso ebesinayo ngekota leyo, njalo njalo kwiingxelo ezizayo.
Kwimeko kaGoogle Umhlawuli yiGoogle IrelandNgenxa yoku, imisebenzi esiza kuyifumana kukuba ayiyiyo inkampani yaseSpain, kodwa yinkampani ye-European Union, le ayixhomekekanga kwi-VAT. Kwimeko apho kuya kufuneka ucwangcise inkqubo ubhaliso kwiRegistry yabaSebenzi boMbutho wabahlali ngaphakathi kwifom 036.
Emva koku siza kuthi sivelise uxanduva lokuza nekota nganye, njengoko besesitshilo ngaphambili, kwimodeli ethile ebizwa ngokuba yi IFom 303 yokuhlawulwa kweVAT kwaye qho ngonyaka a isishwankathelo ngemodeli 390. Ukongeza ekwenzeni irekhodi yee-invoyisi ezikhutshiweyo nezifunyenweyo, ekufuneka zigcinwe iminyaka emine ubuncinci, ongummiselo weVAT wokuncitshiswa.
Ngaphandle kwale nto ikwabangelwa ngoku ngekota ngemodeli eyi-130 yentlawulo yamaqhezu eRhafu yeNgeniso kuBantu (IRPF), Ingeniso efunyenwe kwintengiso iyakuboniswa, kunye nenkcitho enokuhlawuliswa kulomsebenzi, kwaye kulomahluko ubala i-20% leyo ekufuneka ihlawulwe kwi-Ofisi kaNondyebo, emva koko wenze irhafu yonyaka irente.
Kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuba zonke ezi ngxelo kufuneka zisoloko zenziwa, nokuba asinalo naluphi na uhlobo lwengeniso kwaye asikabizi okanye sichithe nantoni na, kwimeko apho iiakhawunti ziya kuthi ga, akukho nto iya kuhlawulwa , kodwa kufuneka zinikezelwe ngokufanayo.
Kananjalo ukuba ukhona Ukutshaja okanye ukuhlawulela umboneleli othile wangaphandle, ngaphezulu kwe I-3000 euro ngonyaka, kuya kufuneka wenze imodeli 347, eyenzelwe ukusebenza nabantu besithathu.
NgoKhuseleko lweNtlalo, indlela apho umsebenzi wethu wezoqoqosho uza kuchazwa uya kuba noMthetho woMsebenzi oZimeleyo, oku kuchazwa njengomntu wendalo okanye wezomthetho owenza imisebenzi yezoqoqosho rhoqo, eyomntu, ethe ngqo kunye Inzuzo.
Ibhaliswe ngale ndlela ngokhuseleko lwezentlalo kuba imisebenzi yethu yezoqoqosho ihlala isenzeka, iwebhusayithi apho sineAdsense isesidlangalaleni ngokuqhubekayo, yipropathi yethu eyenza ukuba ibe yeyakho ngqo, ezi mpawu zoluhlobo lomsebenzi wezoqoqosho zisenza ukuba sibe Umsebenzi ozimeleyo.
Kuba sibhalisiwe njengabasebenzi abaziqeshileyo noKhuseleko lweNtlalo, ubuncinci beendleko zenyanga ziya kuba zii-260 ze-euro, nangona kunjalo, unokukhetha okubizwa ngokuba ngumgangatho othe tyaba, ukuba awubhaliswanga njengomsebenzi ozimeleyo kwiminyaka emihlanu edlulileyo kwaye abanabasebenzi phantsi kwakho. Kule meko ukuba ukhetha ireyithi ethe tyaba, indleko iya kuba malunga ne-50 euro ngenyanga kwiinyanga ezintandathu zokuqala, i-130 euros ngenyanga kwezinye ezintandathu ezilandelayo, i-189 ye-euro ngenyanga kwezinye iinyanga ezintandathu, kunye nezinye ezithandathu ukuba ungaphantsi kweminyaka engama-30 ubudala, uye emva koku ukuya kumrhumo oqhelekileyo wama-euro angama-260 ngenyanga.
Enye imeko enokuqwalaselwa iindleko zokubhalisa ezisezantsi kuKhuseleko lweNtlalo kukusebenzela omnye umntu, kwimeko apho unokukhetha ukunciphisa i-50% kwiakhawunti yomntu oziqeshileyo, inokuba njalo kwimeko yabasebenzisi abaninzi beAdsense.
Qiniseka ukuba ucetyiswa kakuhle
Ukugqiba inqaku, kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba banokwaziswa ngeentlobo ngeentlobo zamarhe malunga nokuba kufuneka zenziwe njani na iingxelo ngokwamatyala afana ne-Adsense, umzekelo, Ukuba umvuzo omncinci awufikelelwanga, akuyomfuneko ukubhalisa, oku akuyonyani ngokupheleleyo. Ke kungcono uzame Lumka kangangoko kule micimbi kwaye kungcono ukuyishiya ezandleni zengcali ecebisa ngeyona ndlela ilungileyo ngetyala lakho, ukuze iingxaki ezinokuthi zigcinwe kwixesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Izaziso » Uyixela njani ingeniso yeAdsense
Enkosi ngokuchaza umxholo kakuhle kwinqaku. Ngamanye amaxesha kunzima ukwazi ukuba ungayichaza njani ngokufanelekileyo ingeniso kwi-intanethi.
Amanani otyalo-mali anokukunceda njani?
Ngaba kufanelekile ukuthatha isikhundla kukhuseleko olubizayo?